DAAWO:-Cali Guudlaawe oo helay taageerada qaar kamid ah khabilada Hiiraan | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Cali Guudlaawe oo helay taageerada qaar kamid ah khabilada Hiiraan
DAAWO:-Cali Guudlaawe oo helay taageerada qaar kamid ah khabilada Hiiraan
Magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay kulan lagu taageeray madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka HirShabeelle Cali Cabdullahi Xuseen (Cali Gudlaawe) xilli magaaladaas ay maalmihii la soo dhaafay ka dhaceen banaanbaxyo lagu diidanyahay inuu yimaado.
Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka reer Hiiraan ee ku nool magaalada Beledweyene oo kulankaas ka hadlay ayaa sheegay inay taageersanyihiin madaxweyne Cali Guudlaawe, iyagoo sheegay sababta ay ku taageerayaan.
“Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waa gobollo mataano ah, shalay hadaan madaxweynaha heysanay, iyagaa maanta heysta, waxaana ku taageereynaa Cali Guudlaawe shalay markii aan heysanay madaxweynaha reer Shabeellada Dhexe ma aysan qeylin, marka xaq maaha inaan anagu maanta qeylino, dadka cabanaya ee dhahaya waxaan nahay reer Hiiraan, waxaan leeyahay dadka kula degan haka been sheegina, aan tashano wax hadey inka maqanyihiin waa maga wada maqanyihiine,” ayuu yiri mid ka mid ah odayasha warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne.
Daa’uud Yuusuf Nuur Faarax oo ka soo jeeda beesha Makanne, isla arkaana ka mid ah waxgaradka reer Hiiraan ayaa sheegay inay ku qanacsanyihii doorashadii uu ku soo baxay Madaxweyne Cali Guudlaawe, isagoo sheegay in muhiimadu ay tahay jiritaanka HirShabeelle oo kaliya, isagoo wax laga haboonaa ku tilmaamay in tabasho ay qabto hal beel in dusha loo wada saaro reer Hiiraan.
Sidoo kale Nabadoon Islow Maxamed Muuse oo sheegay inuu ka soo jeedo beesha Baadi Cadde ayaa sheegay in hoggaanka HirShabeelle ay ku soo dhaweynayaan gacmo furan, isagoo tilmaamay in reer Hiiraan aan loo afduubi karin hal beel.
Dhammaantood xubnaha kulankaas ka hadlay waxay sheegeen in gobolka Hiiraan ay deganyihiin 14 beelood, waxa cabanayana ay tahay hal beel oo kaliya.
Odayaasha iyo waxgaradka ku shiray magaalada Beledweyne ee taageeray maadxweyne Cali Guudlaawe ayaa sheegay inay kala metelayaan 13 beelood oo wada degta Magaalada Beledweyne ee xarunta goboka Hiiraan.
“Wixii reer Hiiraan ka maqan waan wada doona karnaa ee hal beel ma doona karto, madaxweynaha nasiibka u helay in HirShabeelle loo doortana waan soo dhaweyneynaa, madaxweyne hadii la diido wax soconaaya malahan hal qabiil nama dhihi karo,” ayuu yiri Nabadoon Islow Maxamed Muuse.
Isagoo sii hadlayey ayuu yiri, “Cali Guudlaawe noo diidi mayo wax naga maqan, beeshii shalay dheefta heysatay oo hadana sii heysata inay maamulkii diido wax na qabta maaha, waan ku xushmeyneynay, laakiin hada waxa ay wadaa raali kama noqon karno, Cali Guudlaawe waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaaw, hadii garoonka loo diidana anigaa hadda garoon u diyaarinaya.”
Previous articleGaadiid Xamuul kii ugu badnaa oo ku xaniban Duleedka Garoowe +SAWIRRO
Next articleDAAWO:-Axmed Daaci oo u jawaabayey Goodax Barre
Kenya oo raali galin ka bixisay xad gudub diplumaasiyadeed oo ay...